warkii.com » Taageerayaasha Amitabh Bachchan iyo Abhishek oo ku jahwareeray sawir uu soo dhigay John Cena iyo falcelinno ay ka sameeyeen:
Taageerayaasha Amitabh Bachchan iyo Abhishek oo ku jahwareeray sawir uu soo dhigay John Cena iyo falcelinno ay ka sameeyeen:
Jilaaga ka tirsan shirkadda Hollywood ee John Cena ayaa markale kasoo muuqday cinwaannada wargeysyada ka faallooda arrimaha Bollywood kaddib markii uu bartiisa Instagram soo dhigay sawir ay ku wada jiraan Amitabh Bachchan iyo Abhishek Bachchan.
Cena oo sidoo kale maqaam sare ka gaaray ciyaarta musaaracada gaar ahaan bandhigyada shirkadda WWE isagoo ah lagdamaa sare ayaa soo dhigay sawir ay ku wada jiraan labada xiddig ee is dhalay, isagoo aanan soo raacin wax qoraal ah.
Amitabh iyo Abhishek ayaa maalintii sabtida laga helay cudurka COVID-19, waxaana ay qabsadeen cinwaannada dunida oo dhan, waxaana dadkii kasoo fal celiyay xaaladdooda ka mid ahaa John Cena kaasoo marwalba soo dhiga sawirrada dadyow kale, waxaana uu taageerayaasha u ogolaaday inay qiyaasaan ujeeddada sawirka Big B iyo wiilkiisa maadaama uusan kusoo dul qorin ereyo ku qotoma sawirka.
John ayaa horraan bartiisa Instagram soo dhigay sawirrada xiddigii geeriyooday ee Irrfan Khan, Rishi Kapoor iyo Sushant Singh Rajput, sidaas darteed sawirka uu soo dhigay ee reer Bachchan ayaa yara jahwareeriyay qaar ka mid ah taageerayaasha India, waxaana mid ka mid ah dadkii araahda ka dhiibanayay uu soo qoray: “Mudan, wey nool yihiin”, halka qaar ay u qaateen inuu ka walaacsan yahay xaaladdooda caafimaad, iyagoo ducooyin iyo taageero u muujiyay Amitabh iyo Abhishek.
John Cena ayaa shacbiyad badan ku leh dalka India, waxaana uu si dhow ula socdaa xaaladaha Bollywood-ka, isagoo hore bartiisa ugu faafiyay sawirrada Ranveer Singh, Shilpa Shetty iyo Asim Riaz, waxaa sidoo kale uu taageero badan kusoo jiitay markii uu soo dhigay sawirka Sushant Singh Rajput markii uu geeriyooday.
Waxaa qoray Axmed Nuur Cabdi Xaashi